chhalphal News - करोड पटक हेरियो ‘मंगलम’ गीत, केक काटेर सेलिब्रेसन
सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनले मात्र देशलाई स्थायित्व दिनसक्छः अध्यक्ष थापा
पूर्व राजाको परिवार पोखरामा, समर्थकले गरे नाराबाजी
आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गछौंः मन्त्री पुन
करोड पटक हेरियो ‘मंगलम’ गीत, केक काटेर सेलिब्रेसन
बिहिबार, २४ फागुन २०७४, ०८ : ००
काठमाडौं । केही वर्ष अगाडिसम्म लाख 'भ्यू' नपुग्ने नेपाली फिल्मका गीतसंगीत पछिल्लो समय युट्युबमा करोड भ्यूअर्स पनि सामान्य बन्दै गएको छ । यस्तैमा फागुन २५ गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘मंगलम’ को ‘पर्ख पर्ख मायालु’ बोलको गीतलाई पनि युट्युबमा करोड पटक हेरिएको छ ।
युट्युबमा सार्वजनिक भएको ६ महिनामा यो गीतले करोड भ्यू पाएको हो । गीत रिलिजको क्रममा फिल्मको प्रदर्शन मिति भने असोज ११ गतेलाई पक्का गरिएको थियो । लोक लयको गीतमा कृष्ण काफ्ले र विन्दु परियारको स्वर छ भने दिपक शर्माको शब्द-संगीत सुन्न सकिन्छ ।
शिल्पा पोखरेल र पुष्प खड्का छमछम नाचेको गीतको भिडियाका कोरियोग्राफर कविराज गहतराज हुन् । बुधवार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच निर्माण टिमले युट्युबमा गीतलाई करोड पटक हेरिएको अवससरमा केक काटेर सेलिब्रेसन गर्‍यो । गीत संगीत उत्कृष्ट भएकै कारण धेरै फिल्मले बिजनेशमा बाजी मारेको रेकर्ड फिल्म क्षेत्रमा छ । 'नाई नभन्नु ल' का संस्करणदेखि 'छक्का पन्जा २' सम्म पछिल्ला उदाहरण हुन् । त्यसैले पनि ‘मंगलम’को व्यापारिक सफलताको लागि यो गीतले ठूलो अर्थ राखेको छ ।
नायिका शिल्पा पोख्रेल प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्मका कार्यकारी निर्माता छविराज ओझा हुन् । फिल्मलाई नवल नेपालले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा शिल्पा र पुष्पका अलावा पृथ्वीराज प्रसाई, नीर शाह, मिथिला शर्मा लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भूमिका छ । फिल्मको निर्मातामा दिजेन्द्र शाक्य, साकार ओझा र ओम गुरुङ रहेका छन् भने विष्णु घिमिरेको छायाँकन, दिपक शर्माको संगीत, गोविन्द फुँयालको कथा, कविराज गहतराजको नृत्य निर्देशन रहेको छ ।
श्रृंखलाको मिस वर्ल्ड अन्तिम ३० मा स्थान सुरक्षित, जितिन् मल्टिमिडिया अवार्ड
निक र प्रियंकाको विवाह सकियो, विवाह स्थलमै भयो झडप
‘हिमालय रोडिज’को उपाधि आयुषलाई
टोकियोमा 'छक्का पन्जा-३'को ओपनिङ सो हाउसफ़ुल, पुनः सो हुने
गरुड पुराणको फस्टलुक सार्वजनिक, माघ ४ मा आउनेछ प्रदर्शनमा
बिहेका लागि इटाली पुगे दीपिका र रणवीर
नारायणकाजी श्रेष्ठ र कोमल ओलीको बिहे !
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न पार्टीभित्रैबाट दबाब, वामदेवले थाले गृहकार्य !
गृहमन्त्रीसहित नौ मन्त्री परिवर्तन
निर्मलाको हत्या गरेको प्रदीप रावलको बयान
प्रचण्ड पार्टी भित्र बहुमतमा, झस्किए ओली
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर सिफारिस
कोलकतामा ३३ किलो सुनसहित दुई नेपाली पक्राउ, नेपालबाट हराएको सुन हुनसक्ने आशंका
मनाङ्गेको मुद्दा पुनः सुनुवाइ हुने
नेकपा सचिवालय बैठकः स्थायी कमिटीको बैठकको एजेन्डाबारे छलफल